मार्च 2, 2019 मार्च 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक	8 Comments कोदो, डा. अरुणा उप्रेती
कोदो र यसका फाइदाहरु ! खानेकुराको प्रसंग आउँदा हामी स्वादको कुरा गर्छौं पहिले । तर, स्वाद केका लागि रु जिब्रोका लागि । निश्चिय नै स्वाद जिब्रोका लागि हो, खाना भने स्वास्थ्यका लागि । अब सोचौं त, खाना जिब्रोका लागि खाने कि स्वास्थ्यका लागि रु अब ढिलो नगरौं, जागौं । टेस्टी होइन, हेल्दी खाना रोजौं । हुन त, रहरलाग्दा र मिठोमसिनो खानेकुरा देख्दा हाम्रो जिब्रो रसाउँछ । यही जिब्रो हो, हामीलाई धोका दिने । जब जिब्रोका लागि खानेकुरा खोज्न थाल्छौं, स्वास्थ्यलाई पूरै उपेक्षा गर्छौं । परिणाम, त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्छ । यसले शरीरलाई पोषण दिनुको साटो जीर्ण र रोगी बनाउँछ ।
‘ठूलोबडाको ठूलै नाम’ भनेझैं होटेलमा पकाएको बासी भातलाई १० चोटी तताइसकेको तेलमा भुटेर दिँदा पनि हामी ‘फ्राइड राइस’ भन्दै मज्जाले पैसा तिरेर खान्छौं । जबकि, घरमा साँझ पकाएर राखेको भात बिहान खाँदा जुठो हुन्छ भनेर कुकुरलाई दिने गरिन्छ । सानो जिब्रोको स्वादले भविष्यमा कति समस्या निम्त्याउँछ भन्ने हामी पढेलेखेकाले त्यति हेक्का राख्दैनौं । होटेलका चम्किला प्लेटमा सजाइएका अस्वस्थकर खानेकुराले स्वास्थ्यमा के के हानी र्पुयाउँछ भन्ने हामी वास्ता राख्दैनौं । हाम्रो भोजनप्रतिको अज्ञानता, भएका खानेकुराको सदुपयोग गर्ने कला अभाव र प्याकेटका खानेकुरा मात्र उत्तम हुने मानसिकताले नै हामीलाई अस्वस्थ बनाउँदै लगेको छ । अस्वस्थकर खानपानकै कारण हामीलाई रोग लाग्छ भन्नेसमेत बिचार नगर्दा हाम्रो लाखौं रुपैयाँ स्वास्थ्योपचारमै खर्च हुने गर्छ ।
अछाम, मुगुजस्ता जिल्ला पुग्दा स्थानीय रुपमा पाइने खानेकुरा भेटिएन । अछाममा कोदोको रोटी बनाउन होटेलकी साहुनीलाई अर्डर दिँदा उनले एक पटक माथिदेखि तलसम्म हेरिन्।‘काठमाडौंबाट आएका मान्छेले पनि कोदो खान्छन् र रु’ उनले आश्चर्य प्रकट गरिन् । ‘जौ नै पाइने ठाउँमा जौको पिठोको रोटी बनाइदेउ न,’ मैले भनें ।फापरमा पाइने ‘रुटिन’ नामक तत्वले शरीरमा भिटामीन ‘सी’को कामलाई बढाउन मद्दत गर्छ । अर्थात, शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ र बुढ्यौलीको प्रक्रियालाई कम गराउँछ ।
‘जौ त खाली पूजा गर्दा, ब्रत बस्दा मात्र खाने चलन छ,’ उनले भनिन् । कोदो, फापर, जौ, मकै आदि स्वास्थ्यबर्धक अन्न हुन भनेर मैले आफ्ना छरछिमेकलाई भनें । शायद कमैले वास्ता गरे होलान् ।‘अब कहीं नपाएर हाम्रो खेतमा फल्ने मकै, कोदो, फापर पनि त्यस्तो गुणले भरिएका होलान् र रु’ कसैकसैको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो । यसरी घरमा रहेका, परापूर्वकालदेखि चलिआएका सस्ता खानेकुरा छाडेर महँगो खाना किन्दा बजेटमा पनि नराम्रो असर पार्छ । कुपोषणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न पैसा खर्च गर्नुपर्ने त छँदैछ, मानसिक तनाव पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
← रुद्राक्ष र यसको महत्त्व
दही र मोहीका फाइदाहरु →
सेप्टेम्बर 7, 2019 सेप्टेम्बर 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
8 thoughts on “कोदो र यसका फाइदाहरु”
Pingback:कुहिरो कसरी र किन लाग्छ ?